トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Asa fandaniana ireo efi-trano matetika ny pachinko Sarotra ny fampihenana ny mpanjifa
, fa misy vola lany ny asa ao amin'ny anankiray amin'ireo kaonty ho an'ny lehibe ao amin'ny lanjan'ny vola lany amin'ny Pachinkoya. Koa satria mivoaka dia mety tsy azo hahena amin'ny payout ny mpanjifa sy ny eto be loatra ny fampiasana ny vola, fa tokony hijery toy ny anankiray amin'ny pamantarana.
asa mety vola lany amin'ny pachinko parlors, moa ve ianao ho tena ilaina ny olona maro?
pachinko fivarotana, ary fivarotana no nampiditra ny rafitra mba hanisa ny payout tonga dia atao hoe rafitra manokana, na ho lasa boaty feno baolina hametraka ny efajoro ao amin'ny dolara, raha mandeha an-trano, mangataka mba mikoriana antsoina hoe ny mpiasa na, dia azo zaraina ho ny pachinko efi-trano ny rafitra ara-dal?na. Raha niresaka momba ny asa ny mpiasa ao amin'ny
pachinko parlors izay nampiditra ny rafitra manokana, dia ho afa-olana amin'ny ankapobeny fanodinana. In pachinko parlors mieritreritra miaraka amin'ny fanindriana ny mpanjifa, isika ankehitriny efa nampidirina maro. Ao amin'ny rafitra manokana, mpiasa, ary ny tokan-tena miray saina fisafoana nosy, na fampitandremana fa raha tsy misy mampiahiahy mpanjifa, mety tsy ho afa-tsy izany sy ny pachinko milina ny fanadiovana izany na ny valiny ny fanontaniana. Satria
, dia ho ampy ny hametraka ny telo tamin'ireo vondrona 300 ny lavaka amin'ny olona roa. Ary koa, satria ny mpanjifa antsika rehetra ny tenanao, ianao ekena izany isan'ny olona, ??na inona na inona ny fandidiana. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko rafitra manokana fampidiran-dresaka, raha mihoatra io isa io, na dia nanana ny mpiasa, dia mety manana asa be loatra ny vola lany.
_ x000D_ mifamadika amin'izay, ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko izay mivelatra eny an-mahazatra rafitra, dia nanjary tena na ny isan'ny mpiasa ilaina. Ny pachinko parlors izay nampiditra ny rafitra manokana, noho ny habetsahan'ny asa ho avy amin'ny samy hafa rehetra. Ao amin'ny rafitra iray mahazatra, ny fifanakalozana ny vola omby vavy, ny asa mandalo baolina dolara boaty ny fiaramanidina manohitra, table de Fanamboarana, pachinko milina fanadiovana, manana mpanjifa fanohanana sy asa isan-karazany. Satria dia ho entina ao amin'ny fanompoana an'i
mpiasa rehetra, raha famokarana miakatra, dia nanjary nilaina ny mpiasa amin'ny alalan'ny vola izany.
amin'izao fotoana izao, raha efa nihena ny isan'ny mpiasa fotsiny satria maimaim-poana ny fotoana toy izany, raha mba misy asa kisendrasendra lasa tsara kokoa, ny fanompoana dia tsy ho ela intsony underserved ao. Mba tsy toy izany, amin'ny pachinko parlors izay maka ny rafitra ara-dal?na, raha misy maromaro nametraka ny vondrona 300, avy any amin'ny efatra enina mpiasa tsy maintsy handeha hiasa isan'andro.
izao no, na dia amin'ity tontolo ity mba niaro ny andro tsy mandeha, tsy miova.
Noho izany, na dia amin'ny efi-trano ara-dal?na pachinko mpiasa manam-potoana angamba ny rafitra, no ho lalana tsy misy asa vola lany. Ao amin'ny
isan'andro fandidiana tsy misy pachinko parlors, mazava ho azy satria mety koa fa ny vola lany overuse ny asa dia tsy hoe categorically, dia diniho ny ankapobeny. Amin'izany fomba izany, ny zava-misy fa na na tsy misy vola lany overuse ny asa, dia miovaova be arakaraka ny fampidirana rafitra.
Raha asa maro Kakare vola lany, ny fiantraikan'ny tsy mivoaka kely payout dia, marina izany. Na ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko mba handeha hiaraka aminao, pachinko parlors mampiasa ny vola lany dia asa simbasimba, andramo kely fandinihana. Work, table de Fanamboarana, pachinko milina fanadiovana, manana mpanjifa fanohanana sy asa isan-karazany. Satria dia ho entina ao amin'ny fanompoana an'i
Raha asa maro Kakare vola lany, ny fiantraikan'ny tsy mivoaka kely payout dia, marina izany. Na ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko mba handeha hiaraka aminao, pachinko parlors mampiasa ny vola lany dia asa simbasimba, andramo kely fandinihana. Tsy handeha hiasa.
Raha asa maro Kakare vola lany, ny fiantraikan'ny tsy mivoaka kely payout dia, marina izany. Na ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko mba handeha hiaraka aminao, pachinko parlors mampiasa ny vola lany dia asa simbasimba, andramo kely fandinihana.